Fianarana sy santionany momba ny mpanjifa SEO
Fandinihana tranga momba ny mpanjifa SEO ary…
Fianarana tranga Isenselogic.com SEO ho an'ny mpanjifa ankehitriny
Orinasa marobe no manatona isan'andro avy amin'ireo orinasa SEO mampanantena ny hitondra azy ireo amin'ny pejy voalohany amin'ny Google. Eto amin'ny Isenselogic.com tena asehonay anao ny santionany kely amin'ny valin'ny fikarohana ny mpanjifanay amin'ny pejy fanadihadiana tranga SEO
Amin'ity pejy ity dia asehonay anao ireo orinasa marobe eto an-toerana sy orinasa Nasionaly 1 izay nanampy anay hahazo ny pejy voalohany amin'ny Google. Ireo orinasa rehetra ireo dia nahita mpanjifa be dia be rehefa tonga teo amin'ny pejy voalohany. Google dia mampiasa mba hampisehoana ireo orinasa 7 ambony amin'ilay nantsoina hoe fonosana 7. Taona vitsivitsy lasa izay dia naverin'izy ireo ho amin'ny 3-entana mba hanerena ireo orinasa eo an-toerana handoa doka. Ny olana lehibe amin'ny fandoavana doka dia ny 94 isan-jaton'ny mpanjifa tsy manindry azy ireo satria hitan'izy ireo hoe hatraiza ny fahaizan'ny orinasa raha toa ka mila mandoa doka. jereo: https://searchenginewatch.com/sew/news/2200730/organic-vs-paid-search-results-organic-wins-94-of-time
Ny orinasa 3 voalohany sy ny orinasan'ny SEO dia orinasa eo an-toerana avokoa izay manana adiresy ara-batana. Asongadino aloha ny teny lakile ary avy eo asongadin'ireo mpanjifanay amin'ny valin'ny karoka. Tadidio fa ny valiny dia mety miovaova kely arakaraka ny toerana misy anao, na tafiditra ao amin'ny Google ianao ary antony maro hafa ampiasain'i Google hamaritana ny valin'ny karoka. Fa amin'ny ankapobeny dia tokony hahita valiny mitovy amin'ny voatanisa eto ianao. Ireto koa dia santionan'ny teny lakile fotsiny. Ny mpanjifanay tsirairay dia manana maro hafa teny fanalahidy miseho amin'ny pejy voalohany amin'ny Google sy Bing ary ny motera fikarohana hafa.
Mpanjifa 1: Fandinihana tranga SEO ho an'ny famoronana volo nataon'i Knikki
Toerana: Leesburg, Virginia
Karazan'orinasa: Salon fanaovana hatsarana sy taovolo fikarakarana indrindra ny volon'ny vehivavy afrikanina amerikana.
Mpanjifa 2: Fandinihana tranga SEO ho an'ny trano fisakafoanana Yen Ching
Toerana: Lakewood, Washington
Karazan'orinasa: Trano fisakafoanana sinoa
Mpanjifa 3: Fandinihana tranga SEO ho an'ny rongony Green Collar
Toerana: Tacoma, Washington
Karazan'orinasa: Dispensary Marijuana fialamboly ara-dalàna
Mpanjifa 4: Fandinihana tranga SEO ho an'ny DispensaryExchange.com
Toerana: manerana ny firenena
Karazan'orinasa: Directory of Dispensary / Vendor
Mpanjifa 5: Fandinihana tranga SEO ho an'ny ganja
Toerana: Edmond's Washington
Karazan'orinasa: Dispensary Marijuana fialamboly
Mpanjifa 6: Fandinihana tranga SEO ho an'ny Isenselogic.com
Toerana: Bellevue Washington
Karazan'orinasa: SEO sy famolavolana tranonkala
Ny fanontaniana lehibe apetraky ny mpanjifa dia ny hafiriana vao hahatratra ny pejy voalohany amin'ny Google. Betsaka ny lafin-javatra izay hamaritra an'io, ao anatin'izany ny halavan'ny fotoana nanananao ny sehatra nomenao, ny isan'ny rohy anananao ary ny habetsaky ny atiny ao amin'ny tranokalanao. Ny mpanjifanay rehetra dia nahatratra ny pejy voalohany tao anatin'ny 3 volana ary ny sasany raha vantany vao 30 andro. Ny antoka omenay ny mpanjifanay dia raha tsy eo amin'ny pejy voalohany amin'ny 3 volana ianao dia hiasa maimaimpoana mandra-pahatonganao. Tsy mbola nisy izany fa manome anao fitoniana fa vita tsara ny asa. Google manavao ny pejy misy azy isaky ny telo volana ka izany no fitsipika ankapobeny manonona ny mpanjifanay. Ny fandalinana tranga SEO dia tokony hampiseho aminao fa afaka mahavita ilay asa izahay ary manampy amin'ny fampivoarana ny orinasanao.
Ny drafitra SEO anay dia manomboka amin'ny $ 549 isam-bolana fotsiny. Manomboha izao !.
Drafitra momba ny vidin'ny SEO